ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသတင်း၊ အမြင်များ၊ သုတေသန၊ မူဝါဒများ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ အစီအစဉ်များနှင့်အဖြစ်အပျက်များအတွက်အရင်းအမြစ်နှင့်အသိုင်းအဝိုင်း
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign (GCPE) သည်အကြမ်းမဖက်သောနိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျောင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအကြားအကြမ်းဖက်မှုယဉ်ကျေးမှုကိုငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းနိုင်ရန်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည်။
GCPE ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အီး - ဆက်သွယ်မှုများသည်ဂျာနယ်များနှင့်လွတ်လပ်သောနှင့်မီဒီယာရင်းမြစ်များမှထုတ်ဝေသောမူလဆောင်းပါးများ၊ သုတေသနနှင့်ပုံပြင်များအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းမှငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကိုဖော်ပြသည်။ အထူးသဖြင့်အားပေးပါတယ် ဆောင်းပါးနှင့်အဖြစ်အပျက်တင်ပြချက်များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များကနေ။
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ၎င်းတွင်ရည်မှန်းချက်နှစ်ခုရှိသည်။
ပထမ ဦး စွာကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျောင်းများရှိငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သောပညာရေးအပါအ ၀ င်ပညာရေးနယ်ပယ်အားလုံးတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကိုအများပြည်သူသိရှိစေရန်နှင့်နိုင်ငံရေးအထောက်အပံ့များတည်ဆောက်ရန်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံသားများသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုနားလည်သောအခါငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပconflictိပက္ခကိုအပြုသဘောဖြေရှင်းရန်ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။ လူ့အခွင့်အရေး၊ ကျားမခွဲခြားမှုနှင့်လူမျိုးရေးတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီနေထိုင်ပြီးနေထိုင်ရန်၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှုကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ခြင်း၊ နှင့်ကမ္ဘာမြေ၏သမာဓိရှိလေးစားပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်စနစ်တကျပညာရေးမရှိလျှင်ထိုသို့သောသင်ယူမှုကိုမရနိုင်ပါ။
ထိုကဲ့သို့သောပညာရေး၏အရေးကြီးမှုနှင့်လိုအပ်မှုကို ၁၉၇၄ တွင်ယူနက်စကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမူဘောင်တွင်ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည်။ ကတိက ၀ တ်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မူဝါဒချမှတ်သူများအားဖိတ်ခေါ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးလုပ်ငန်းများကိုပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသို့မိတ်ဆက်ပေးရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ မေလတွင်ကျင်းပသောငြိမ်းချမ်းရေးလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများကွန်ဂရက်မှဟိဂ်အယူခံဝင်ခဲ့သည်။ ပညာရေးအသင်းများကွန်ယက်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာ၊ အမျိုးသားနှင့်ဒေသဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၊ ပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာနများနှင့်ဆရာပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများအားယူနက်စကိုမူဘောင်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာမှုအားလုံးတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်အတွက်လက်ရှိတည်ရှိနေသောနည်းစနစ်များနှင့်ပစ္စည်းများအကြောင်းသတင်းပေးပို့မည့်နိုင်ငံသားများနှင့်ပညာပေးသူများ၏ကွန်ယက်များ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ရည်မှန်းချက်မှာကမ္ဘာတဝှမ်းရှိပညာရေးစနစ်အားလုံးသည်ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုအတွက်ပညာပေးလိမ့်မည်ဟုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည်တရား ၀ င်မဟုတ်သော၊ တရားဝင်မဟုတ်သောပညာတတ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောတရားဝင်မဟုတ်သောကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီသည်အထက်တွင်ရှိသောရည်မှန်းချက်များကိုဖြေရှင်းရန်မိမိတို့၏ထူးခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
ဤပုံစံသည်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွင်ပါ ၀ င်သူများအားသူတို့၏မဲဆန္ဒနယ်မှသူများ၏ပန်းတိုင်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သူတို့၏စွမ်းအင်ကိုအာရုံစိုက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည်ပညာရှင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်၎င်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်သတင်းလွှာများမှတဆင့်အတွေးအခေါ်များ၊
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (The Hague)
လူနေမှုတန်ဖိုးများ - ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်
အနာဂတ် / ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖောင်ဒေးရှင်း (ကိုလံဘို) ကိုခွင့်ပြု
Pan Pacific နှင့်အရှေ့တောင်အာရှအမျိုးသမီးအသင်း
Pax Christi အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
အက်ဥပဒေ ၁ တင်ပြချက်များ (အမေရိကန်)
Aotearoa - နယူးဇီလန်ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာရေးဖောင်ဒေးရှင်း
ASEPaix၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှပညာရေးဆိုင်ရာပညာပေးအဖွဲ့ (Suisse des Educateurs)
Ashta NO Kai (အိန္ဒိယ)
Asociacion Respuesta (အာဂျင်တီးနား)
Assumption College (ဖိလစ်ပိုင်)
အစ်ကိုကြီးများ - Kerryville (USA)
ဗုဒ္ဓ၏လူကြိုက်များသောလူမှုဝန်ထမ်းလူ့ဘောင် (ဘလူး) (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်)
CEAL- Ciudardes Educadoras America Latina (အာဂျင်တီးနား)
CEDEM-Centre d'Education et de Developpement for Enfants Mauriciens (Mauritius)
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းလေ့လာရေးစင်တာ၊ တက္ကသိုလ် BK (ဆားဘီးယား၊ FR ယူဂိုဆလားဗီးယား)
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးစင်တာ၊ Miriam ကောလိပ် (ဖိလစ်ပိုင်)
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတမှုနှင့်တည်တန့်ရေးဖန်တီးမှုစင်တာ (ဖိလစ်ပိုင်)
CETAL- ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ယက်ယဉ်ကျေးမှု (ဆွီဒင်)
CEYPA-Civic Education Youth Albania အစီအစဉ်
ကလေးများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖိလစ်ပိုင် JMD အခန်း
City Montessori ကျောင်း (CMS, India)
Concord ဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ရှင်ကောင်စီ (ယူကေ)
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်သောလူငယ်များ (CONYOPA, Sierra Leone)
Cosananig အဖွဲ့အစည်း (နိုင်ဂျီးရီးယား)
ပflိပက္ခအား Creative Response (USA)
CRAGI၊ ပflိပက္ခဖြေရှင်းရေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမှီခိုမှု (အမေရိကန်)
[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] Sarajevo - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအသင်း
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကျေးလက်ဒေသမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် Artisanat (ကင်မရွန်း)
ဒွန် Bosco ပညာရေးဆိုင်ရာအသင်းဖိလစ်ပိုင် DBEAP
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပညာရေးအတွက်ဘော်လကန် (ဘော့စနီးယား - ဟာဇီဂိုဗီးနား)
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပညာရေးစီမံကိန်း (Landegg International University, Switzerland)
Educadores paraaPaz (ဘရာဇီး)
Elimu Yetu ညွန့်ပေါင်း - ကင်ညာ
ESR အမျိုးသားစင်တာပConိပက္ခကိုဖန်တီးရာအူပည်ူပည်ဆိုင်ရာပCenterိပက္ခဖြေရှင်းရေးအဖြဲ National
Fundacio per la Pau (စပိန်)
Fundación Casa De La Juventud (ပါရာဂွေး)
Fundacion Gamma Idear (ကိုလံဘီယာ)
Helplife ဖောင်ဒေးရှင်း (ဂါနာ)
Grupa“ Hajde Da …” (သည်းခံခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဘဲလ်ဂရိတ်လူငယ်စင်တာ)
GUU ဖောင်ဒေးရှင်းလူထုအခြေပြုပြန်လည်ထူထောင်ရေး (ယူဂန်ဒါ)
Halley လပ်ြရြားမြ (Mauritius)
Hessisches Landesinstitut fürPädagogik (ဂျာမနီ)
လူ့အခွင့်အရေးမျက်စိနှင့်ပညာရေးစင်တာ (HREEC, ကင်မရွန်း)
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနှင့်သုတေသနဌာန Iligan စင်တာ (ဖိလစ်ပိုင်)
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအိန္ဒိယဌာန
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘက်စုံခရီးသွားလုပ်ငန်းပညာရေးစင်တာ -IHTEC (ကနေဒါ)
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နိုင်ငံတကာမစ်ရှင် (Sierra Leone)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်ပါလီမန် / Oxfam Australia
Jane Addams ၏ငြိမ်းချမ်းရေးအသင်း Inc (USA)
Jigyansu လူမျိုးစုသုတေသနစင်တာ (အိန္ဒိယ)
Landegg နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ် (ဆွစ်ဇာလန်)
Multi- တိုင်းရင်းသားကလေးများနှင့်လူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာများ (ကိုဆိုဗို၊ FR ယူဂိုဆလားဗီးယား)
Narvik ငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်း (နော်ဝေ)
NDH- ကင်မရွန်းနှင့်အာဖရိက Grassroot ဒီမိုကရေစီကွန်ယက်
ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ယက်ယဉ်ကျေးမှု (CETAL) (ဆွီဒင်)
Nova, Centro para la Innovacón (စပိန်)
အာဖရိက ဦး ချို၏ငြိမ်းချမ်းရေးရုံး OPIHA (ယူအေအီး / ဆိုမာလီယာ)
Pan-African ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးကောင်စီ (နိုင်ဂျီးရီးယား)
Parbatya Bouddha မစ်ရှင် (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်)
Pax Christi ဖလန်းဒါးစ် (ဘယ်လ်ဂျီယံ)
Pax Educare- ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Connecticut စင်တာ
Paz y Cooperación (စပိန်)
Peace 2000 Institute (အိုက်စလန်)
Peace Pledge Union (ယူကေ)
ငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနဌာန -Dundas (ကနေဒါ)
ပြည်သူ့လွှတ်တော် (Leskovac, ယူဂိုဆလားဗီးယား)
Plowshare စင်တာ (အမေရိကန်)
Proyecto 3er မီလင်နီယို (အာဂျင်တီးနား)
Quaker ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှု (ယူကေ)
Humanism နှင့် Jaiprithvi အတွက်သုတေသနပညာရပ် (RAFHAJ, Nepal)
Robert Muller ကျောင်း (ယူအက်စ်)
Sakha Ukuthula (တောင်အာဖရိက)
Galego de Educacion မှပုဒ် (စပိန်) Seminario
အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာ (International) အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာ (International) စေတနာ့ဝန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှု
ဆွီဒင်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အနုညာတစီရင် Society က
Triratna လူမှုဖူလုံရေးအသင်း (Bangaladesh)
ဗီယင်တိုးစ်စဲလ် Sur (အာဂျင်တီးနား)
ယူနက်စကို Etxea (စပိန်)
Winpeace (အမျိုးသမီးများငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပဏာမခြေလှမ်း၊ တူရကီ)
သမိုင်း & အောင်မြင်မှုများ
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကင်ပိန်း (GCPE) ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်မေလတွင်ကျင်းပသောဟိဂ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အယူခံညီလာခံတွင်စတင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါကွန်ဖရပြီးနောက်, အ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျဟိဂ်အယူခံ ကင်ပိန်းညှိနှိုင်း၏တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာကတည်းကညှိနှိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ငွိမျးခမျြးရေးလှေ, အ Columbia University ရှိဆရာများကောလိပ်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးစင်တာ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ အ အမျိုးသားငြိမ်းချမ်းရေးအကယ်ဒမီ တိုလီဒိုတက္ကသိုလ်မှငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးပဏာမခြေလှမ်း။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ GCPE လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်သည်။
GCPE သည်ကျောင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအကြားအကြမ်းဖက်မှုယဉ်ကျေးမှုကိုငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းနိုင်ရန်အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းထားသည့်ကွန်ယက်တစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
စစ်ပွဲအားအကြမ်းမဖက်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး ၁၂ ခုကိုစတင်ခဲ့သောနယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ ဟိဂ်ရှိတစ် ဦး ချင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုစုစည်းရန်ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှု (1996 - 1999) ။
ထောက်ပံ့ပေးသော website တစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သည်
လူ ဦး ရေ ၁၅၀၀၀ ကျော်အားသတင်းအချက်အလက်နှင့်အရင်းအမြစ်များဖြန့်ဝေရန်မိတ်ဖက်များတိုးမြှင့်ခြင်း
စစ်ပွဲဖျက်သိမ်းရန်သင်ယူခြင်း - ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုကိုသင်ကြားပေးခြင်း
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးပညာရေး - နိုင်ဂျာ၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ ပီရူးနှင့်ကမ္ဘောဒီးယားမှစိတ်ပြောင်းခြင်း
နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးပညာပေးများနှင့်နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ (၂၀၀၄ ကိုအယ်လ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံ၊ တီရာနာမြို့၌ကျင်းပခဲ့သည်)
အာဖရိက၊ အာရှ၊ ဥရောပ၊ နယူးဇီလန်နှင့်တောင်အမေရိကရှိပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သောအယ်လ်ဘေးနီးယား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်ပီရူးနိုင်ငံများရှိလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်ကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးဌာနနှင့်အတူထူးခြားသည့်မိတ်ဖက်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ၂၀၀ ကျော်နှင့်သင်တန်းများ၊ ရပ်ရွာများ၊ အမျိုးသားအဆင့်နှင့်နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးများတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းသည်သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်မေလ ၁၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိနယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ ဟိဂ်မြို့တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်သောဟိဂ်ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ၏နှစ်တစ်ရာအတွင်းကျင်းပခဲ့သည်။
မေလ 18, 1899 တွင်; နိုင်ငံပေါင်း ၂၆ နိုင်ငံမှကိုယ်စားလှယ် ၁၀၈ ဦး သည်ဟားဂ်နိုင်ငံ၏လှပသော Huis den Bosch တွင်သြဂုတ်လအတွင်းကရုရှားနိုင်ငံ၏ Czar လူငယ် Nicholas II ၏ဖိတ်ကြားချက်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်လက်နက်ပြိုင်ပွဲကိုရပ်ဆိုင်းရန်နည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးရန်နိုင်ငံတကာညီလာခံတစ်ခုတွင်စုရုံးခဲ့သည်။
လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းသည်သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်မေလ ၁၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိနယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ ဟိဂ်မြို့တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်သောဟိဂ်ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ၏နှစ်တစ်ရာအတွင်းကျင်းပခဲ့သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှလူ ၁၀၀၀၀ နီးပါးသည်နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးဗျူရို (IPB)၊ နျူကလီးယားစစ်တားဆီးရေးအတွက်နိုင်ငံတကာဆေးသမားများ (IPPNW)၊ အဏုမြူလက်နက်များဆန့်ကျင်သောနိုင်ငံတကာရှေ့နေအစည်းအရုံးမှအယူခံဝင်မှုကိုဟဂ်ျကွန်ဂရက်စင်တာတွင်စုရုံးခဲ့ကြသည်။ IALANA) နှင့်ကမ္ဘာ့ဖက်ဒရယ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (WFM) ။ ၅ ရက်ကြာကျင်းပသည့်အစည်းအဝေးတွင်သင်တန်းသားများသည်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပေါင်း ၄၀၀ ကျော်တွင် ၂၁ ရာစုအတွင်းစစ်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းရန်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုကိုဖန်တီးရန်အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စီမံကိန်းကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ၃၀ ခန့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် Organizing Committee မှ ဦး ဆောင်သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ဟိဂ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အယူခံဝင်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလေးနက်။ လက်တွေ့ကျသောနည်းဖြင့်မေးခွန်းများမေးရန်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းတွင်သွေးထွက်သံယိုရာစုအဆုံးပိုင်း၌ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေမေးခွန်းများမေးရန်ဖြစ်သည်။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်သည်လက်နက်များကိုအသုံးမပြုဘဲ၎င်း၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းရှာနိုင်သည်။ လက်ရှိအာဆင်နယ်အသင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဆွဲပြားများပေါ်တွင်လက်နက်များ၏သဘောသဘာဝကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စစ်သည်လိုအပ်ဆဲ (သို့) တရားဝင်လား။ ယဉ်ကျေးမှုသည်အခြားကြီးမားသောစစ်ပွဲမှလွတ်မြောက်နိုင်မည်လား။ ”
တက်ရောက်သူရာပေါင်းများစွာမှအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များနှင့်အစိုးရ ၈၀ မှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုဖီအာနန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၀ န်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာဆီနာ၊ နယ်သာလန်မှ ၀ မ်ကော့၊ ဂျော်ဒန်ဘုရင်မနူးရ်၊ အိန္ဒိယမှအွန်ဒတ်တီရွိုင်း၊ တောင်အာဖရိကမှဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးဒက်စမွန်တူးတူး၊ ဂွာတီမာလာမှ Rigoberta Menchú Tum၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှဂျိုဒီဝီလျံ၊ အရှေ့တီမောနိုင်ငံမှJosé Ramos Horta နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှ Joseph Rotblat ။
လွန်ခဲ့သော ၉၉ နှစ်ကစစ်ပွဲ၊ အစာခေါင်းပါးခြင်းနှင့်အခြားကာကွယ်တားဆီးနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများကြောင့်သမိုင်းတွင်အခြားအချိန်များထက်သေခြင်းနှင့်ရက်စက်စွာသေဆုံးခြင်းများပိုမိုတွေ့မြင်ရသည် အာဏာရှင်အစိုးရများ၊ စစ်အစိုးရများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါဝါရုန်းကန်မှုများကြောင့်ဒီမိုကရေစီ၏နူးညံ့သောမီးလျှံသည်တစ်ခါတစ်ရံမှေးမှိန်သွားသည်ကိုသူတို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သူတို့သည်မြေကြီး၏မျက်နှာသာနှင့်မြေကြီးလွင့်မျောသွားသောအကြားရှိဂလူးကို့စ်ကျယ်ပြန့်လာမှုနှင့်ယခင်ရှိခဲ့သည့်အရာတို့သည်အဆုံးစွန်သို့ ဦး တည်သွားခြင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
သို့သော်နှစ်များအနေဖြင့်ပြည်သူလူထု၏လက်ရှိဖိနှိပ်မှုများကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းနှင့်ကျား၊ မလိင်ကွဲပြားမှု၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ ဘာသာရေးနှင့်တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအပေါ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုစသည်တို့ကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းကိုမျက်မြင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဤနှစ်များသည်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတများပေါက်ကွဲခြင်းကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၎င်းသည်ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်၌နေထိုင်သူအားလုံးအတွက်ကောင်းမွန်သောဘဝဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ကြောင်း၊ အကယ်၍ အလေးအနက်ထားပါကထိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုအဖြစ်မှန်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည့်စကြဝuniversalာဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကြီးထွားခွင့်ပြုလျှင်ဤအကူးအပြောင်းကိုလမ်းပြနိုင်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ကဏ္manyများစွာမှလူများ၊ အသင်းအဖွဲ့များမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဤရာစုနှစ်သမိုင်းကြောင်းကိုသတိပြုမိပြီးမိမိကိုယ်ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦး ဆောင်ရန်ဝန်ခံသူများအားအောက်ပါအယူခံကိုထုတ်ပေးသည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုကျယ်ပြန့်သောအရင်းအမြစ်များမညီမျှမှုဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလူမျိုးစုများ၏ရန်လိုမှုနှင့်လူမျိုးစုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းတို့ပါ ၀ င်သောပconflictိပက္ခကိုကာကွယ်ရန်ရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပြီးအကောင်အထည်ဖော်ပါ။ နှင့်သမားရိုးကျလက်နက်များနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖျက်ဆီးခြင်းလက်နက်များ ပို၍ သေစေနိုင်သောအာဆင်နယ်များရှိနေခြင်း။ ပconflictsိပက္ခများပေါ်ပေါက်လာပါကကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများရှိသော်လည်းမလွှဲမရှောင်သာပြုလုပ်နိုင်သည့်အနေဖြင့်၎င်းတို့အားအကြမ်းဖက်မှုကိုအသုံးမပြုဘဲဖြေရှင်းရန်ရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပြီးအကောင်အထည်ဖော်ကြပါစို့။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းရှိဟိဂ်မြို့၌ကျင်းပခဲ့သောငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ၏လုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်ကြပါစို့။ လွန်ခဲ့သည့်ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲအပြီးတွင်ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်တွင်ခေတ္တခဏတောက်ပနေသောယေဘူယျနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး၏ရူပါရုံကိုပြန်သွားခြင်းအားဖြင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံသစ်များနှင့်အခြေခံကျကျအားဖြည့်ထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရား ၀ င်ဖွဲ့စည်းမှုလိုအပ်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်များသိသင့်သည်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ၀ ိညာဉ်ရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစိတ်ဆန္ဒကိုရှာဖွေကြပါစို့။ သို့သော်နျူကလီးယားလက်နက်များ၊ မြေမြှုပ်မိုင်းများနှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီသောအခြားလက်နက်များဖျက်သိမ်းခြင်း၊ လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုကိုဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ၎င်းသည်ကုလသမဂ္ဂပtheိညာဉ်စာတမ်းပါပြaggress္ဌာန်းထားသည့်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသောအဆင့်များ၊ စစ်ပွဲမရှိသည့်ကမ္ဘာသို့အသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားပိုမိုအားကောင်းစေခြင်း၊ ပconflictိပက္ခဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းများကိုဆန်းစစ်။ ပconflictိပက္ခများကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းခြင်း၏တီထွင်ဖန်တီးမှုနည်းလမ်းများတီထွင်ခြင်း။ နှင့်ကိုလိုနီစနစ်ကို၎င်း၏ပုံစံအားလုံးတွင်ကျော်လွှားပြီးဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပပျောက်ရေးအတွက်လက်နက်ပြိုင်ပွဲအဆုံးသတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းဖြင့်လွတ်မြောက်လာသောကြီးမားသည့်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုရန်၊ neocolonialism; ကျွန်စနစ်သစ်၊ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုအသစ်; ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ နှင့်အားလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တရားမျှတမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်။
ဆွေးနွေးချက် & လှုပ်ရှားမှု
၂၁ ရာစုအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တရားမျှတရေးအတွက်ဟိဂ်အစီအစဉ်ကိုစစ်ပွဲဖျက်သိမ်းရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးမြှင့်တင်ရေးအတွက်အကြံပြုချက် ၅၀ ပါ ၀ င်သည်။ အစီအစဉ် (UN Ref A / 21/50) ကို HAP စည်းရုံးရေးနှင့်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဝင်များ၊ ရာနှင့်ချီသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တစ် ဦး ချင်းများအကြားပြင်းထန်သောဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် ၂၁ ရာစုအတွက်လူသားများရင်ဆိုင်နေရသောအရေးအကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုအချို့ကိုလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နိုင်ငံသားများကထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအရာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည်အဓိကကြိုးလေးချောင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
“ ဟိဂ်အစီအစဉ်” ကို download လုပ်ပါ။
Tirana ဆွေးနွေးပွဲ & Tirana ခေါ်ဆိုမှု
Tirana Call သည်“ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးမှတစ်ဆင့်ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - အကြမ်းဖက်မှုမရှိသောကမ္ဘာကိုပညာပေးခြင်း” ဟူသောညီလာခံ၏ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်အယ်လ်ဘေးနီးယားရှိ Tirana တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
ဤခေါ်ဆိုမှုသည်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအားပညာရေးပုံစံအားလုံးတွင်ပေါင်းစည်းရန်နှင့် ၁၉၉၅ ယူနက်စကိုလှုပ်ရှားမှုမူဘောင်ကိုကတိကဝတ်ပြုရန်ကတိတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း၊ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်၊ လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက် ၁၃၂၅ အမျိုးသမီးများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေး၊ ၂၁ ရာစုအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာဟိဂ်အစီအစဉ်။
ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များ၊ သံအမတ် Anwarul K. Chowdhury၊ အတွင်းရေးမှူးချုပ်လက်အောက်ခံနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများ၊ ကုန်းတွင်းပိတ်ထားသည့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနှင့်ကျွန်းငယ်လေးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနများကအတည်ပြုခဲ့သည်။ ပြည်နယ်များ၊ ကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးဌာနမှ Michael Cassandra
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Tirana ခေါ်ဆိုမှု
အဆိုပါ Tirana ညီလာခံ
ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီကအောင်မြင်သောကွန်ဖရင့်တစ်ခုကိုအယ်လ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံ၊ တာရာနာတွင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူတက်ရောက်ခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်တာရာနာခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မင်းတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆီကိုဖြန့်ဝေပြီးပို့ပေးလိမ့်မယ်ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
တက်ရောက်သူများ၏မတူကွဲပြားမှုများမှာအလွန်ထူးခြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထူးခြားသောလူငယ်များရှိခဲ့ပြီးအနာဂတ်တွင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုခေါင်းဆောင်ပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်မည်မှာသေချာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အစိုးရနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောလူများရှိကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂမှကိုယ်စားပြုသောအမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများမြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ဘက်ရှိတိုက်ကြီးတိုင်းကိုအကောင်းဆုံး၊ တရားဝင်နှင့်တရားဝင်မဟုတ်သောပညာတတ်များနှင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောစည်းရုံးရေးမှူးများပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign နှင့်ပါ ၀ င်နေသူများကိုလူသစ်များနှင့်အတူကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးရေးရာဌာနနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောလက်တွဲဖော်လေး ဦး နှင့်အတူတကွစုရုံးခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘောဒီးယား၊ ပီရူး၊ နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်အယ်လ်ဘေးနီးယားရှိအစီအစဉ်များနှင့်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်များရှိနေပြီး၎င်းတို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရင်းအမြစ်များဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးလက်အောက်ခံ Anwarul Chowdhury၊ ကုလသမဂ္ဂ DDA မှ Michael Cassandra တို့၏မိန့်ခွန်းများ၊ ပါမောက္ခဘက်တီ Reardon မှပါ ၀ င်သည့်ဟောပြောချက်များနှင့်ပါ ၀ င်သူများစာရင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ထံမှသတင်းစကားများကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အယူခံ ၀ င်ခြင်းနှင့်ယခုကမ္ဘာတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုအတွက်ဆက်လက်စိတ်ဝင်စားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင် ပို၍ အရေးပါလာနေပြီဖြစ်သည်။
Cora Weiss သမ္မတ
ညီလာခံစာတမ်းများ & အစီရင်ခံစာများ
Anwarul Chowdhury မှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်
Cora Weiss ဖွင့်လှစ်သောလိပ်စာ
Betty Reardon မှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်
Michael Cassandra မှထုတ်ပြန်ချက်
TONY JENKINS, Global ညှိနှိုင်းရေးမှူး
Tony Jenkins ပါရဂူဘွဲ့သည် (၁၈) နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုနှင့်နိုင်ငံတကာပညာရေးအစီအစဉ်များနှင့်စီမံကိန်းများကို ဦး ဆောင်လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ တိုနီသည်ဂျော့ချ်တောင်းတက္ကသိုလ်ရှိတရားမျှတမှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာမှုများတွင်အချိန်ပြည့်ကထိကဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစ၍ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် ငွိမျးခမျြးရေးပညာရေးအပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအင်စတီကျု (IIPE) နှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign (GCPE) ၏ညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူသည်ပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ ပညာရေးဒါရိုက်တာ၊ World BEYOND War (2007-2016)၊ Toledo တက္ကသိုလ်မှငြိမ်းချမ်းရေးပညာပေးအစီအစဉ် (၂၀၁၄-၁၆)၊ ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်ဒုဥက္ကPresident္ဌ၊ အမျိုးသားငြိမ်းချမ်းရေးအကယ်ဒမီ (၂၀၀၉-၂၀၁၄)၊ ပူးတွဲဒါရိုက်တာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးစင်တာ၊ ဆရာများကောလိပ်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် (၂၀၀၁-၂၀၁၀) နှင့်။ ၂၀၁၄-၁၅ တွင်တိုနီသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားပညာရေးဆိုင်ရာယူနက်စကို၏ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးအဖွဲ့တွင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
MICAELA SEGAL DE LA GARZA, စီမံကိန်းမန်နေဂျာ
Micaela Segal de la Garza သည်ဘာသာစကားမျိုးစုံသင်ကြားသူဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကိုအာရုံစိုက်သည်။ Mica သည်ဟူစတန်ရှိအများပြည်သူဆိုင်ရာအထက်တန်းကျောင်းတွင်စပိန်သင်တန်းများသင်ကြားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ထိုတွင်ယခင်နှစ်ကကျောင်းသားနှစ်ပတ်လည် ၀ န်ထမ်းများနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများအတွက်ဆရာအကြံပေးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အခြားစာသင်ခန်းများတွင်ပြင်ပတွင်နေထိုင်သောသဘာဝရှိစင်တာတွင်မူလတန်းအရွယ်ကလေးငယ်များအားသူမသင်ကြားပေးသည့်နေရာနှင့်သူနှင့်စီမံကိန်းများကိုညှိနှိုင်းသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာသင်ခန်းများပါဝင်သည်။ ငွိမျးခမျြးရေးပညာရေးကို Global ကင်ပိန်း။ သူမသည်စပိန်ရှိ Universitat Jaume I တွင်နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပictိပက္ခနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာမာစတာကိုလေ့လာခဲ့ပြီးသူမ၏အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့၊ စပိန်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများတွင်သုံးဆအဓိကဖြစ်သော San Antonio ရှိသုံးပါးတစ်ိန်တက္ကသိုလ်၊ တက္ကဆက် သူမသည်သူမဆက်လက်သင်ယူနေပြီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း.
Kevin Kester, စာအုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်အယ်ဒီတာ
Kevin Kester သည်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ပညာရေးဌာနမှ AHSS နယူတန်သုတေသနတွဲဖက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင်ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာပါရဂူဘွဲ့ကိုပြီးဆုံးသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်သူသည် Cambridge နှင့် Queens 'College တို့တွင်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သောစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်စစ်ဌာနနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာဒဏ်ခံနေရသောနေရာများမှရွှေ့ပြောင်းကျောင်းသားများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောပညာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူကိုစတင်ပါလိမ့်မည်။ ပါရဂူဘွဲ့မတိုင်မီကကီဗင်သည်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ၊ ဒေးဂျုန်တက္ကသိုလ်မှနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာမှုလက်ထောက်ပါမောက္ခနှင့်ဆိုးလ်ရှိကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတက္ကသိုလ်အာရှပစိဖိတ်စင်တာတွင်နိုင်ငံတကာရေးရာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပညာရေးလက်ထောက်ပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့သည်။ ကီဗင်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးဂျာနယ်အပါအ ၀ င်ဂျာနယ်အတော်များများတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အသွင်ပြောင်းပညာရေးဂျာနယ်; ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပReviewိပက္ခပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ထို့အပြင်သူသည်“ လူငယ်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ Initiative ရေလက်စွဲ - ကမ္ဘာမြေဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရန်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များ” (Vandana Shiva နှင့်) ပူးတွဲစာရေးသူဖြစ်သည်။
Olive Rizzi Carlson, Assoc ။ အယ်ဒီတာ
Oliver Rizzi Carlson သည် UNDP မှငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ယူနီဆက်မှငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး၌မဟာဘွဲ့ရရှိထားသည်။ သူသည်လူငယ်များနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ပတ်သက်သောသင်ကြားရေးနေရာများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး၊ လူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများညီညွတ်သောကွန်ယက် (UNOY Peacebuilders) အတွက်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ UN အဖွဲ့၏ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆယ်စုနှစ်အပြီးတွင်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှကမ္ဘာ့အစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်သောလူငယ်အဖွဲ့ ၀ င်အိုလီဗာသည် ၀ န်ကြီးဌာနများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံများဆိုင်ရာမဟာမိတ်အဖွဲ့ (GAMIP) ၏တက်ကြွစွာအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 12, 2019 မှာ 2: 11 ညနေ
ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့တစ်ဝက်လောက်အတွက်ကနေဒါငြိမ်းချမ်းရေးတက္ကသိုလ်ထူထောင်ချင်တယ်၊ ၁၀ နှစ်လောက်ကြိုးစားပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ငွေကြေးအင်အား မှလွဲ၍ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကမှပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်။
(အပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်၏ဆောင်းပါး၊ “ ဆောင်းပါးနှင့်အဖြစ်အပျက်များတင်ပြခြင်း” သည်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ )
တိုနီ Jenkins says:
ဧပြီလ 12, 2019 မှာ 5: 42 ညနေ
မင်္ဂလာပါ Janet Hudgins သည်ကနေဒါငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တည်ထောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သောကြောင့်ဝမ်းနည်းပါသည်။ ကနေဒါငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပictိပက္ခလေ့လာရေးအသင်း (PACS-Can) နှင့်သင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါသလား။ https://pacscan.ca/en/home/.
ကျိုးပဲ့သော link ပေါ်တွင်မှတ်စုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုပြင်လိုက်ပြီ
စက်တင်ဘာလ 13, 2020 မှာ 6: 57 ညနေ
Alireza Moharrer ဖြစ်သည် says:
နိုဝင်ဘာလ 15, 2020 မှာ 1: 17 ညနေ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏တစ်နေ့တာအလုပ်မှာအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွား (လွတ်လပ်သောသုတေသန) သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အသင်းအဖွဲ့နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏သင်္ချာဆိုင်ရာရှုထောင့်များအကြောင်းဖြစ်သည်။ လူမှုရေးစာချုပ်သဘောတူညီချက်များ (စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း) တွင်ပconflictsိပက္ခများဖြေရှင်းရေးအတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်ချဉ်းကပ်မှုများရှိသည်။ ငါ (ဒီအလုပ်အကြောင်းတိုနီရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်နေတုန်းပဲ) K K Boulding's The Image ကိုလေ့လာမယ်။ ခင်ဗျားဆီကနေကြားချင်လားဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ် တိုနီ၏ The Image ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်အောက်ခြေမှတ်ချက် ၁၃ ကိုကြည့်ပြီးနောက်သင့်အားဤမှတ်စုကိုပို့ပေးပါမည်။ အကောင်းဆုံး၊ အလီ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2020 မှာ 3: 08 ညနေ
ငါယူဂန်ဒါအရှေ့ပိုင်း Tororo ခရိုင်မှ Donato ပါ။ ARDOC Single Mother's Project ယူဂန်ဒါအမျိုးသမီးများ ဦး ဆောင်တဲ့လူထုအခြေပြုအဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုသင်တန်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများမှတစ်ဆင့်အသွင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက်ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးများနှင့်လူငယ်များကိုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးပါ သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကို။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဖွဲ့အစည်းတွင်ပါ ၀ င်လိုကြသည်။
Facebook စာမျက်နှာ။ “ ARDOC ကြင်ဖော်မဲ့မိခင်များယူဂန်ဒါစီမံကိန်း”
ဇွန်လ 9, 2022 မှာ 1: 14 ညနေ
ကျွန်တော် ဒီအဖွဲ့အစည်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။